AFLAXNET.COM Aftahan.com Allpuntland. Afgoi.com Arlaadinet. Arlaadi.com. Allgedo.com All Wadi.com All Somali.com
Beledweyne.com Bakaarahaonline Baafin.com bbcafSomali Boosaaso.com. benadir islam.com Beeerlulaonine.com Balcad.com Benadir.com. boqolsoon.com Burtinle.com Buurhakaba.com BanadirCity Buulay.com
Codk Somali Galb. Codka Beesha Cayaaraha.com Ceelbuurnet.com Ceelbuur.com
Dayniile.com... Djibouti Net.. DR.Online (Somali) Diinsoor.com Dalka.onlinet Deeyoo.com
Gacal/Gorfeyn... Geeska Afrika Gedonet.com Godmorgendanmark Goofka.com Goobjoog.com Gaashaamo.com
HornAfrik Online Hiiraan Online Hiiraantimes Hobyonet.online Halgamenews Himilo.online
Jammaame.com Jamhuuriya.info Jubbaland.Onlone Jowhar.com Janaale.com Jiimonet.com
Marka Caddeey Mogadishu.com Midnimo.com Mudug.com. Maandeeq.com Midgaan.com Mudisho.University
Qaranimo.com Qoraxay.com Qaamuus.comOnkod.net
Somaaljecel.Com. Somalidoon.com Somalinimo.com
Shabeelle.net Shangaani.com Somitek
Somali.Weyn Somaligalbeed... SomaliGovernment SATEC
Somaliwebsite.com Somaaljecel.Com.. Somitek
Somali R. & H. cer
Somaliland.......... Suldaan.com....... Somalilife.com Somalicitizen.com Somali.bantuu.com Somali.lawers.com Somali.Post Suxufi.com Somalilandnews.com Somalilandnet. Somali.Cartuun.com
True Somali......... UN-Somlaia Wadani.com Wariye.com
Guest Book FIKRADAHA WANAAGAN
SHIRKADDA EUROSOM OO XAFIIS GANACSI KA FURTAY MAGAALADA GUANGZHOU EE DALKA SHIINAHA (CHINA) CLICK
Warar Goosgoos ah: Ruunkinet 20/12/2009 (Click)
Warar Goosgoos ah: Ruunkinet 18/12/2009 (Click)
Warar Goosgoos ah: Ruunkinet 16/12/2009 (Click)
Warar Goosgoos ah: Ruunkinet 15/12/2009 (Click)
Warar Goosgoos ah: Ruunkinet 12/12/2009 (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 07/12//2009 (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 04/12//2009 (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 30/11/2009 (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 28/11/2009 (Click)
Warar Goos goos ah 07-12 November 2009 Ruunkinet (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 06/11/2009 (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 05/11/2009 (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 02/11/2009 (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 31/10/2009 (Click)
Somali man aged 112 marries girl of 17Buzz up!(Click) Read in English
Qarax goor dhaweyd lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowlada Somaliya.Ruunkinet 30/10/2009 (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 30/10/2009 (Click)
Warar Goos goos ah. Ruunkinet 28/10/2009 (Click)
Sheekh Shariif Oo Muqdisho ku noqday. Ruunkinet 28/10/2009 (Click)
Yemen oo Soomaaliya la taageero ku baaqday. Ruunkinet 28/10/2009 (Click)
AMISOM Oo Muqdisho dhaq dhaqaaq ka sameysay iyo madaafiic ku dhacday..... Ruunkinet 28/10/2009 (Click)
Warar Goosgoos ah oo ku saabsan Somaliya. Ruunkinet 26/10/2009 (Click)
Heshiiska xukuumadda Soomaaliya iyo isbahaysiga ay ku wada gaareen Jabuuti. Ruunkinet 10/06/08 (Click)
Isbahaysiga lagu sameeyay Asmara oo sheegay in ay Jabuuti u tageen in ay la kulmaan QM balse indhaha ay iska eegayeen wafdiga dowladda federaalka ah qolka shirka ka soconaya Jabuuti. Ruunkinet 13/05/08 (Click)
Abuu Mansuur oo sheegay in Adan Ceerow lagu dilay weerar cirka ah. Ruunkinet 01/05/08 (Click)
Ra'isul wasaare Nuur Cadde oo la filayo in uu dhawaan u soo diro guddi la xaajooda mas'uuliyiinta isbahaysiga ee ku sugan magaalada Nayroobi. Ruunkinet 01/04/08 (Click)
Ciidamada Maxaakiimta oo ka baxay Buulo Burte kadib markii ay guri guri uga raadiyeen Yuusuf Dabageed iyo Cabdicasiis Duurow oo ku biiray muqaawimada. Ruunkinet 01/04/08 (Click)
Shir Ballaaran oo Jaaliyadda beelaha Hawiye ay shalay ku yeesheen magaalada London oo baaq laga soo saaray. Ruunkinet 30/03/08(Click)
Xasan Abshir iyo Cali Geeddi oo xusul duuub ugu jira in lagu bedelo Cabdullahi Yuusuf iyo Nuur Cadde iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah oo si weyn u doonaya in uu baarlamaanka ka ansixiyo in Puntland ay u madax bannaanto shidaalka degaankeeda. Ruunkinet 02/03/08 (Click)
Khilaaf dhaqaale oo la sheegay in uu soo kala dhex galay labada Shariif ee ugu sareysa Ibahaysiga Asmara iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada oo ka cabanaya in howshooda ay dadkale wadaan. Ruunkinet 24/02/08 (Click)
Shir muhiim ah oo madaxtooyada uga socda madaxda sare ee dowladda federaalka ah kadib markii shalay galab ciidamadooda looga xoog roonaaday qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Ruunkinet 19/02/08 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo dhawaan ka amba baxaya Addis Abababa iyo dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo isku diidan howlaha dib u heshiisiinta ee uu wado ra'isul wasaare Nuur Cadde. Ruunkinet 15/02/08 (Clcik)
Cabdullahi Yuusuf oo caawa u duulaya Itoobiya iyo howsha Nuur Cadde oo ay cagaha ku dhegan yihiin uururka AlShabaab iyo koox xag jir ah oo ka tirsan maamulka dowladda federaalka ah ee Soomaliya. Ruunkinet 06/02/07 (Click)
Gacmo Dheere oo la sheegay in loo soo magacaabi doono safiirka Soomaaliya u fadhiisan doona London kadib markii lagu bedelay Cabdifataax. Ruunkinet 24/01/08 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo la sheegay in dhakhtarkiisa iyo qaar ka tirsan beesha caalamka ay ku la taliyeen in uu ka joogo shaqada uu hayo caafimaadkiisa dartiis. Ruunkinet 15/01/08 (Click)
Al Shabaab iyo kooxo kale oo ka tirsan muqaawamada la dagaalanta ciidamada Itoobiyo iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ka sii go'aya Isbahaysiga lagu aasaasay Asmara iyo xildhibaanno ka tirsan BF oo isku diyaarinaya in ay ridaan xukuumadda Cusub. Ruunkinet 08/01/07 (Click)
Ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya oo soo gaaray Baydhabo si uu u hubiyo magacayada wasiirada cusub oo saacadaha soo socda la magacaabi doono. Ruunkinet 03/01/08 (Click)
Dagaallo ay ku dhinteen dad rayid ah iyo qaar ka tirsan ciidamada Itoobiya oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho iyo shir ay isugu immaanayaan qaar ka tirsan aqoon yahanno iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo Jabuuti ka billabanaya 15ka bishan. Ruunkinet 13/12/07 (Click)
Dowladda Mareykanka oo la sheegay in ay qarka u saaran tahay in ay ka saarto liiska argagixisada Sheekh Xasan Daahir Awees, Melez Sanaawi oo ku eedeeyay dowladaha Yurub in aysan ku caawin howgallada uu ka wado Soomaaliya iyo warar sheegaya in ciidamo badeed Itoobiyaan ah ay xeebaha Puntland taba bar kula qaadanayaan ciidamada Mareykanka. Ruunkinet 11/12/07 (Click)
Ra'isul wasaare Nuur Cadde oo ku laabtay xalay Nayoobi iyo madaxweyne Yuusuf oo ay daweyntiisa billaabatay. Ruunkinet 11/12/07 (Click)
Dagaallo xalay ka dhacay Muqdisho ayadoo ay ciidamada Itoobiya ku noqonayaa xerooyinka ciidamada iyo ra'isul wasaare Nuur Cadde iyo madaxwene Yuusuf oo laga sugayo in ay baarlamaanka horkeenaan dowladdii ah soo dhiseen inta ka horeysa 2da bisha Janaayo 2008. Ruunkinet 09/12/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo la filayo in uu caawa ka soo duulo magaalada Nayroobi iyo qaraxyada lala beegsanaya ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka oo ku sii fidaya meel ka baxsan Muqdisho. Ruunkinet 07/12/07 (Click)
Dabageed oo dil lala damacasanaa ka badbaaday iyo jufoojin ka tirsan beesha Gaaljecel oo ku dagaalay gobolka Shabellada Dhexe. Ruunkinet 06/12/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo doonaya in uu dib u dhigo Motionka ansixinta golaha wasiirada iyo xildhibaan Xasan Abshir oo raba in uu la wareego jagada madaxweynaha Puntland. Ruunkinet 04/12/07 (Click)
Dagaaladda Muqdisho oo sii xoogeystay kadib magaabiddii ra'isul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha oo la filayo in ay dhawaan u kicitimaan Itoobiya si ay uga wada hadlaan xaaladda ka jirta Soomaaliya. Ruunkinet 03/12/07 (Click)
Guddoomiyaha baarlamaanka oo la filayo in uu maanta soo gaaro Nayroobi, Golaha cusub ee wasiirada oo la filayo in 6da bishan la horkeen baarlamaanka iyo ammaanka ra'isul wasaare Cadde oo ay la wareegeen ciidamada madaxtooyada. Ruunkinet 29/11/07 (Click)
Cali Mahdi oo Xamar Aaday, Cabdullahi Yuusuf oo u sheegay maanta musharaxiinta in uu berri magacaabi doono Nuur Cadde iyo ammaanka Nuur Cadde oo ay Itoobiyaanka la wareegeen. Ruunkinet 21/11/07 (Click)
Website ay leeyihiin masuuliyiin sare oo ka tirsan Isbahaysigii lagu sameeyay Asmara oo ku dhow in uu taageeero dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Col. Nuur Cadde oo laga yaabo in loo magacaabo raisul wasaaraha DF kadib marki ay gacan siiyeen qaar ka tirsan haadaha caalamiga, madaxa Bisha Cas iyo Jeneraal Cabdinuur oo ay qaraabo yihiin madaxweyne Yuusuf. Ruunkinet 20/11/07 (Click)
Ali Mahdi iyo Xasan Sheekh oo loo sheegay in ay Nayroobi ku sugaan Jandai Frezier iyo Maxamed Dheere oo dadaal ugu jira sidii asaga ama cid uu wato looga dhigi lahaa raisul wasaare. Ruunkinet 18/11/07 (Click)
Raisul wasaaraha cusub oo la magacaabi doono maalmaha soo socda iyo Mareykanka oo la sheegay in ay kula taliyeen madaxweyne Yuusuf in la magacaabo wasiirro tiro yar iyo tayo badan leh. Ruunkinet 13/11/07 (Click)
Ninkii loo magacaabi lahaa raisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo berri immaanaya Nayroobi iyo madaxweyne Yuusuf oo la sheegay in uu xanuunsan yahay. Ruunkinet 10/11/07 (Click)
Xubnaha beesha caalamka u jooga Nayroobi oo la sheegay in ay handadaad u tegi doonaan magaalada Baydhabo 7da bishan. Ruunkinet 05/11/07 (Click)
Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf oo weli suurta gal u noqon la'dahay in ra'isul wasaaraha dibadda uu ka keeno iyo Cali Mahdi oo xusullo duubo ugu jira sidii ra'isul wasaare looga dhigi laha qof asaga uu wato. Ruunkinet 04/11/07 (Click)
Prof. Cali Geeddi oo Itoobiyaanka u sheegay in xitaa haddi ay barlamaanka casilaan tagi doonin iyo ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu dilay degmada Towfiiq. Ruunkinet 21/10/07 (Click)
Cabdullahi Yuusuf iyo Geeddi oo la filayo in ay maanta kala baxaan, ciidamada Puntland ee ku sugnaa degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho oo loo sheegay in ay madatooyada ku laabtaan iyo ciidamo taageersan Cali Geedi oo soo buuxiyay goobiyii ay ka tageen iyo 3 ruux oo ku geeriyootay xalay xero ay degen yihiin ciidamda Itoobiya. Ruunkinet 11/10/07 (Click)
Golaha baarlamaanka oo la filayo in bartamaha bishan Oktoobar ay la xisaabtamaan Prof. Geeddi, Col. Cabdullahi Yuusuf oo doonaya in 12ka bishan la kala diro xukuumadda iyo ras'isul wasaaraheeda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo xabsiga lagu sii adkeeyay kadib markii ra'isul wasaaraha uu ku dhawaaqay in xabsiga laga sii daayo. ruunkinet 03/010/07 (Click)
Dowladda Itoobiyo oo ku wargelisay in madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha loo reebo min ah baarbuur ayna ciidamada Itoobiya iyo kuwa Yuganda la wareegaan ammaankooda iyo khilaafaka u dhexeeya labadaasi mas'uul oo la go'aamiyay in ay soo afjaraan golaha baarlamaanka. Ruunkinet 28/09/07 (Click)
Isbahaysigii lagu dhisay Asmara oo qarka u saaran in uu burburo kadib markii la qaatay talooyin khaldan iyo khilaafkii u dhexeeyay madaxweyne Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geeddi oo la sheegay in la soo afjaray. Ruunkinet 26/09/07 (Click)
Cabdi Qeybdiid oo loo haysto in uu ka dameeyay weerarka lagu qaaday Idaacadda Shabelle iyo xeer ilaaliya maxkadda dowladda federaalka ah oo la sheegay in uu ka dambeeyay xiritaanka guddoomiya maxkamadda sare. Ruunkinet 23/09/07 (Click)
Isbahaysiga Asmara oo weli isku khilaafsan qeybsiga iyo awoodda guddiga fulinta iyo ciidamada dowladda federaalka ah oo weli rasaas ku wada xarunta warbaahinta Shabelle ilaa ay ka billaabayaan amaanta dowladda. Ruunkinet 18/09/07 (Click)
Xildhibaan Qanyare oo sheegay in shirkii Muqdisho lagu lunsaday lacago badan iyo magaalada Kismaayo oo ay ku dagaalameen kooxo iska soo horjeeda. Ruunkinet 17/09/07 (Click)
Generaal Cadde Muuse oo Dubai u tagay arrimo caafimaad, dowladda federalka oo sheegtay in ay bandowgii Xamar ka qaaday iyo 3 ruux oo maleeshiya hubeysan ku dileen maanta suuqa bakaaraha. Ruunkinet 13/09/07 (Click)
Sheekh Shariif oo la filiyo in loo doorto gudoomiyaha isbahaysiga ku shiraya Asmara. Ruunkinet 11/09/07 (Click)
Mas'uuliyiinta shirka Asmara iyo dowladda Mareykanka oo aad u sii kala fogaaday iyo madaafiicda lagu garaacayo goobo ay ka mid tahay Villa Soomaaliya oo sii xoogeystay. Ruunkinet 10/09/07 (Click)
Xarunta Maxamed Dheere oo la weeraray maanta iyo suuqa Huriwaa oo ay ciidamada boliiska maanta ku dileen laba ruux oo rayid ah. Ruunkinet 19/08/07 (Click)
Nabaddoon Macalin Haaroon Macalin oo caawa gurigiisa lagu dilay. Ruunkinet 18/08/07 (Click)
Madaxwyne Yuusuf oo maanta shir jaraa'd ka sheegay in Mareykanka raali ka yahay howlaha dowladda ay ka waddo magaalada Muqdisho iyo qaraxyada ka dhacaya Xamar oo ka sii daraya. Ruunkinet 18/08/07 (Click)
Xuseen Caydiid oo sheegay in ay Itoobiya dooneyso in ay si rasmi ah ula wareegto dekedaha Muqdisho, Kismaayo iyo Berbera. Ruunkinet 23/07/07 (Click)
Xildhibaannada ku sugan Baydhabo oo mucaaradnimada Prof. Geeddi ku sii badanaya iyo mudanayaasha baarlamaanka oo beel ku qeybsaday wufuudda ka qeyb galeysa shirka mashruuca Cali Mahdi. Ruunkinet. Ruunkinet 02/07/07 (Click)
Sheekh Adan Xasan Muuse oo lagu dilay magaalada Muqdisho maanta. Ruunkinet 25/06/07 (Click)
Ciidamada Itoobiya oo 45% ka billowday in ay ka qaataan canshuuta magaalada Beledweyne, ciidamada Itoobiya oo baaray gurhaya Muuse Suudi iyo Cabdi Waal iyo Maxamed Dheere oo Gaaray dalka Turkiga. Ruunkinet 21/06/07 (Click)
Ciidamada Itoobiya oo bililiqeystay guriga xildhibaan Cismaan Caato iyo qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay agagaarka garoonka caalamiga ah ee magaalaada Muqdisho. Ruunkinet 15/06/07 (Click)
Qaar ka tirsan ciidamada dowladda ee sugan magaalada Beledwene oo isku dagaalay maanta isbaaro u tiil Buundo Liiqliiqato. Ruunkinet 11/046/07 (Click)
Ex Madaweyne Cabdulqaasim Salaad oo ay gurigiisa bililiqeysteen qaar ka tirsan ciidadama Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ruunkinet 09/06/07 (Click)
Prof. Cali Geeddi oo ka badbaaday qarax lala beegsaday goor dhow. Ruunkinet 03/06/07 (Click)
Guddoomiyaha baarlamaanka oo Baydhabo ku soo laabtay maanta iyo golaha baarlamaanka oo diyaarinaya in ay motion dhex keenaan shirka baarlmaanka. Ruunkinet 02/06/07 (Click)
Golaha baarlamaanka oo ku wareesan in shirka dib u heshiisiinta ee guddoomiye Cali Mahdi yahay mid lagu heshiisiinayo beelo ama mid dhex maraya dowladda iyo mucaarad, iyo guddiga maaliyadda mudanayaasha baarlamaanka oo doonaya in ay dowladda kala xisaabtamaan dhaqaali soo galay iyo meesha ay ku dambeysay kadib markii ay soo bexeen in la lunsaday haatanna la hormarsaday canshuuriyii laga qaadi lahaa dekedda Xamar iyo warar kale. Ruunkinet 20/05/07 (Click)
Qarax lala beegsaday ciidamada Uganda ee ku sugan Muqdisho oo ay ku dhinteen 4 askari. Ruunkinet 16/05/07 (Click)
Col. Barre Hiiraale oo ka baxsaday Baydhabo kuna sii jeeda Kismaayo, golaha baarlamaanka oo dhawaan horkeeni doono MOTION ay isaga xureynayaan laba mas'uul ee ugu sareeya dowladda federaalka ah iyo ciidamda Itoobiya oo diiday in ay aadaan Kismaayo. Ruunkinet 15/05/07 (Click)
Qaar ka tirsan gawaarida ay ka boobeen ciiidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka shacabka ku nool Muqdisho iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa la sheegay in ay gaareen xuduudda Itoobiya ay la leedahay Soomaaliya iyo degaannada Puntland iyo ciidamo ay hoggaaminayaa wasiirku xigeenka dowladda iyo taliayah aagga 1aad oo la filayo in ay dhawaan gaaraan Kismaayo. Ruunkinet 08/05/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo dadaal ugu jiray sidii Afguduud uga talin lahaa Kismaayo iyo taageerayaasha Barre Hiiraale oo diidan iyo Maxamed Dheere iyo Cabdiqeydiid oo sheegay in laga mamnuucay Muqdisho gawaarida muraayadaha madow. Ruunkinet 04/05/07 (Click)
Dagaal cusub oo ka billowday degaanka Ex Koontaroolka Balcad iyo goobihii ay isku hor fadhiyeen ciidamada Itoobiya iyo xoogaga ka soo horjeeda. Ruunkinet 26/04/07 (Click)
Taageerayaasha Col. Barre Hiiraale oo Kismaayo ka saaray taageerayaasha Col. Cabdullahi Yuusuf iyo dagaalladdii Xamar ka socday oo weli soconaya. Ruunkinet 23/04/07 (Click)
Col. Cabdullahi Yuusuf, Xuub Sireed iyo qaar ka tirsan la taliyeyaasha madaxweyne Dowladda federaalka ah oo ka wada hadlay sidii xerata Utaanga loogu furilayaa dadka ka barakacay Muqdisho iyo meelo kale iyo dagaallada Xamar oo ku sii fidaya goobo cusub. Ruunkinet 20/04/07 (Click)
Wasiirro uu ka mid yahay Buubaa oo xilkooda laga qaaday iyo dagaalkii xalay oo dhibaato weyn ka soo gaartay ciidamada Itoobiya iyo dad rayid ah. Ruunkinet 18/04/07 (Click)
Dagaallo cusub oo caawa ka billowday xaafadihii ay isku hor fadhiyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa ka soo horjeeda iyo Sheekh Adan Madoobe oo sheegay in uu xilka ka qaaday xildhibaano ka soo horjeeda ciidamada Itoobiya ee dalka qabsaday. Ruunkinet 17/04/07 (Click)
Wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD oo shiraya arrimaha Soomaaliya iyo dowladda talyaaniga oo wakiil u soo dirtay shirkaasi iyo Prof. Geeddi oo xiray in ay dowladda ku ammartay in ay dadka ka qaxaan xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho. Ruunkinet 13/04/07 (Click)
Dhufeysyo waaweyn oo ay wadooyiinka xaafadada Xamar ka qodanayaan maleeshiyaad hubeysan iyo ciidamada dowladda Itoobiya oo isku ballaarinaya goobo cusub. Ruunkinet 10/04/07 (Click)
Xuub sireed oo si weyn u doonaya in uu xabsiga u taxaaabo dhammaan suxufiyiinta aan asaga ka amar qaadan iyo qaar ka tirsan wax garadka beelaha Muddullood oo la sheegay in ay ka biyo diidsan yihiin qorshaha uu Madaxeyne Cabdullahi Yuusuf ku doonayo in uu isaga horkoono beelaha Habargedir iyo Mudullood. Ruunkinet 10/04/07 (Click)
Xasan Qalaad oo la dhaawacay, Jendai Frazier oo magacawday xubno ay sheegtay in ay ka mid yihiin argagixiso iyo madaxeweyne Cabdullahi Yuusuf oo la sheegay in uu aad uga xun yahay xabad joojinta dhex martay ciidamada Itoobiya iyo beelaha Hawiye. Ruunkinet 07/04/07 (Click)
Col. Cabdullahi Yuusuf oo ku dhiiri gelinaya saraakiisha ciidamada laga keenay Puntland in Hawiye Xamar laga sifeeyo. (Dhageyso)
Baaq Beesha Muddullood. Ruunkinet 03/03/07 (Click)
Shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen beelaha Hawiye oo shalay ka dhacay magaalada London. Ruunkinet 02/04/07 (Click)
Hogaamiye kooxeedyada baarlamaanka ugu yira beelaha Hawiye oo shalay ka diiday Cabdullahi Yuusuf in ay saxiixaan qoraal xasaasi ay oo uu u diyaariyay iyo Maleeshiyada Puntland ee ku sugan dhinaca quqooyiga Muqdisho oo shalay ku garaacay madaafiic xaafadda Arjantiin iyo goobo kale. Ruunkinet 02/04/07 (Click)
Ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa garoonka Stadiyo Muqdisho oo is dhiibay iyo kuwii ku jiray saldhigga Wardhiigley oo ka baxsaday iyo madaxweyne Yuusuf oo la sheegay in uu ku sugan yahay xerada Balli doogle. Ruunkinet 30/03/07 (Click)
Maqaawada Muqdisho oo doonaya in ay dhawaan la wareegaan Madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo dayaarad ay Itoobiya leedahay oo lagu soo riday Xamar maanta. Ruunkinet 30/03/07 (Click)
Baaq ka soo baxay beesha mudulood ee ku dhaqan uk Ruunkinet 27/03/07 (Click)
Buubaa oo safaaradda Soomaalida Kenya u magacaabay M.J. shaqadana ka fadhiisiyay Ina Cali Ameerika iyo Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ah ee Soomaliya oo caawa u dhoofaya Saciidiga si uu shirka uga horjoogsado Prof. Geeddi. Ruunkinet 27/0/07 (Click)
Qarax ka dhacay xalay saldhiga Booliska Beledweyne oo ay dadka reer Beledweynwe ku eedeynayaan maamulka Cabdullahi Yuusuf u magacaabay gobolka Hiiraan. Ruunkinet 27/03/07 (Click)
Guddiga guurtada ee beelaha hawiye oo soo dhaweeyay wadaxaajoodka ay dowladda ugu baaqday iyo Xamar oo looga qaxay si ka daran tii 1991. Ruunkinet 26/03/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo dayruurad Ugaandha leedahay looga qaaday Muqdisho, 38 askari oo reer Puntland oo goor dhow lagu dilay agagaarka Hotel Ramadaan iyo Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Puntland oo looga xoog raanaaday dagaal dhawaan ka dhacay Suuqa Xoolaha, iyo Gacmadhere iyo Cadde Gaabo oo la filayo in ay is casilaan kadib markii lagu ihaaneystay albaabka madaxtooyada 21/03/07 (Click)
Ciidamo reer Puntland iyo Itoobiyaan isugu jira oo meydkooda lagu jiiday magaalada Muqdisho, walaac soo food saaray ciidamo ka tirsan dowladda federaaka ah oo ka soo jeeda beelaha USC iyo qaar ka tirsan waxgaradka beelaha Hawiye oo la sheegay ay daneynayaan sidii ay dagaal ugu qaadi lahaayeen Puntland marka ay ciidamada Itoobiya ka baxaan Soomaaliya. Ruunkinet 21/03/07 (Click)
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo weerartay guriga Dr. Culusow iyo maqaawimada Xamar oo duqeysay goobo ay deggen yihiin ciidamada dowladda kuwa Afrikaanka ah. Ruunkinet 20/03/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf iyo wasiirka arrimaha dibadda Itoobiyo oo shalay iyo maanta uga wada hadlay Villa Soomaaliya waxa laga yeelayo xaaladda nabadgelyada Xamar iyo mudanayaasha baarlamaanka DF oo maanta ka doodaya talaabada laga qaadaya 42 xildhibaan oo loo arkoo in ay isku fikad yihiin Shariif Xasan. Ruunkinet 15/03/07 (Click)
Maqaawimo ka jirta gobolka Jubbada Hoose oo la wareergtay gacan ku haynta Badhaadhe iyo jidka u dhexeeya Afmadow iyo Kismaayo oo la xiray. Ruunkinet 14/03/07 (Click)
Ciidamada Itoobiya oo durbaba billaabay kufashada haweenka Soomaalida, madaxweyne Cabdullahi Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geeddi oo si weyn u doonaya in la bililiqeysto suuqa Bakaaraha iyo weerar culus oo maanta lagu qaaday ciidamada Itoobiya oo marayay Aragaarka sarta Soobe ee KM5. Ruunkinet 13/03/07 (Click)
Sheekh Adan Madoobe oo la filyo in uu ku soo laabto Nayroobi 13ka bishan iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo isu diyaarinayo in ay dagaal kaga hortagaan qorshaha dowladda guryahooda ku baarayaan dhawaan. Ruunkinet 11/03/07 (Click)
Qaar ka tirsan taageerayaasha madaxweyne Yuusuf oo ku howlan in mar kale la soo celiyo dagaaladii sokeeye oo beelaha USC-da ku dhex maray magaalada Muqdisho 1991 iyo Xuub Sireed oo sheegay in dhawaan la soo afjari doono xaaladda cakiran ee ka taagan Xamar. Ruunkinet 09/03/07 (Click)
Ciidamada Uganda oo labo laga dhaawacay ayaguna xasuuqay dad rayhid ah iyo mid ka mid ah maxaabiistii ka fakatay toogashada oo Puntland loo qaadayo. Ruunkinet 08/03/07 (Click)
Ra'isul wasaare Geeddi oo la filayo in uu aado Kuwait si uu u raadiyo dhaqaale ay dowladda federaalka ah dooneysa in ay Kuwait ka hesho, qaar ka tirsan ciidamada Yugaanda oo maanta soo gaaray Xamar iyo mudanayaasha baarlamaanka ee ku sugan Baydhabo oo ka doodaya qodob la xiriira argagixisada oo qaar ka tirsan mudanayaasha baalamaanka ku doonayaan in ganacsatada qaardood lagala wareego hantidooda. Ruunkinet 06/03/07 (Click)
Taageerid Baaqii waxgaradka Muddulood ee waqooyiga Ameerika iyo Yurub oo laga taageeray Sweden. Ruunkinet 05/03/07 (Click)
Kulanka dib u heshiisiinta ay waddo dowladda federaalka ah oo lagu wado in laykugu keeno dad ay ka mid yihiin Ahlu Sunna wal Jamaca oo taageersan siyaasadda madaxweyneha iyo ra'isul wasaare Geeddi iyo dilal kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Ruunkinet 05/03/07 (Click)
Madaafiic lagu tuuray dekedda Xamar oo wax leello geystay iyo maleeshiyaad hubeysan oo isku rasaaseeyay Marka. Ruunkinet 02/03/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo maanta immaanaya Nayroobi si uu uga sii gudbo Kuwait, Inta badan Xildhibaa reer Puntland ugu jira dowladda federaalka ah oo u ol oleynaya in la ansixiyo qodobka la dagaalanka argagixisada iyo tirada uu madaxweyne Yuusuf ku casumaya shir weynaha dib u heshiisiinta oo lagu sheegay in ay dhan yihiin 3000 oo ruux. Ruunkinet 02/03/07 (Click)
Maleeshiya lagu qiyaasay 2000 oo laga soo ururiyay Puntland oo ku soo fool leh Muqdisho, Ballidoogle iyo Kismaayo soona dhaafay Hiiraan. Ruunkinet 28/02/07 (Click)
BAAQ CAMBAAREYN AH EE KA SOCDA WAXGARADKA IYO AQOONYAHANNADA MUDDULOOD. Ruunkinet 27/02/06 (Click)
Shacabka ku dhaqan Muqdisho oo ku kala qeybsan tijaabada ciidamada Itoobiya ay calan cusub uga taageen gooba ka tirsan Xamar, Tafatiraha shabakadda ugu xag jirsan dhinaca dowladda oo loo magacaabay afhayeenka madaxweynaha iyo xildhibaanada diidan joogitaanka ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya oo Baydhabo lagu faquuqay. Ruunkinet 26/02/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo kala hadlay Meles Sanaawi sidii muddo 3 billood ah loogu soo afjari lahaa xaaladda ka jirta Magaalada Muqdisho iyo mudanayaasha baarlamaanka ee ku sugan magaalada Baydhaho oo loo sheegay in ay beelahdooda ka dhaadhiciyaan arrimaha dowladda federaalka ah. Ruunkinet 25/02/07 (Click)
Mudaaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo qabsashada Itoobiya ee dalka Soomaaliya oo shalay ka dhacay London, Ra'isul wasaare Geeddi oo maanta aadaya Baydhabo iyo Sheekh Adan Madoobe oo weli ku sugan magaalada Nayroobi balse aan weli la kulmin dhiggiisa dalka Kenya. Ruunkinet 24/02/07 (Click)
Prof. Geeddi oo ka carooday magacaabidda maamulka Balcad uu magacaabay ku xigeenka wasiirka gaashaan dhigga, shirka Sanca Form oo 27ka bishan ka bilaabanaya Addis Ababa iyo dadka ku geeriyooday madaafiic ay ciidamada Itoobiya xalay fiidkii ku ridday xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen sida la sheegay dad ka badan 10 ruux. Ruunkinet 24/02/07 (Click)
Wiil 12 jir ah oo shalay la xiray muddo gaaban kadib markii uu ku tuuray ukun madaxweyne Yuusuf iyo Wasiirka gaashaan dhigga Yuganda oo ka dhoofay Xamar kadib markii uu la kumlmay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaaka ah ee Soomaaliya. Ruunkinet 23/02/07 (Click)
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo qorsheyneysa in ay albaabada u laabaan masaajidda ku yaal magaalada Muqdisho iyo Guddoomiyihiin Yaashiid oo xalay la dilay. Ruunkinet 22/02/07 (Click)
Mudaaharaad looga soo horjeedo madaxweyne Yuusuf oo ay ka qeyb qaateen qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Ingriiska oo maanta ka dhacay magaalada London. 21/02/07 (Click)
Madaafiic ay Ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xalay u qeybiyay dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Muqdisho oo dhimasho iyo dhaawac badan keenay iyo Shariif Xasan iyo Sheekh Adan Madoobe oo la filayo in u kala baqoolaan London iyo Nayroobi dhawaan. Ruunkinet 20/02/07 (Click)
Saddexda mas'uul ee ugu sareysa dowladda fedeeraaka ah oo wada qorshe xilka looga qaadayo xildhibaannada Baydhabo ka maqan, Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf oo doonay in dhammaan xerooyinka ciidamada ee magaalada Muqdisho la degiyo ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah balse u fasaxay xerada Daraawiishta ee Gaalkacyo in ay degaan dad rayid ah. Ruunkinet 19/02/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo saakay soo gaaray London ayna dad badan diyaarinayaan mudaaharaad looga soo horjeedo, iyo Qaraxyo iyo toogasho isdaba joog ah oo ka dhacday magaalada Muqdisho maanta. Ruunkinet 18/02/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo ku soo jeeda London lana filayo in uu maanta soo gaaro Nayroobi iyo madaafiic ay ciidamada Itoobiya ku garaaceen goobo ka tirsan magaalada Muqdisho oo dad rayid ah deggan yahiin kagadaal markii lagu weeraray Isbitaalka Digfeer. Ruunkinet 17/02/07 (Click)
4 ruux oo ku geeriyootay Laascaano dagaal ka billoday haweenay ay qaraabo yihiin Madaxweynaha oo damacday in ay xoog guri uga dhisato degmada Laas Caano iyo xasuuqidda dadka ku tukada masaajiddada Xamar oo dib ugu soo laabatay magaalada Muqdisho.Ruunkinet 16/02/07 (Click)
Indhacadde iyo Abu Mansuur oo la sheegay in ay gaareen Asmara iyo madaafiic lala dhacay dekedda Xamar iyo goobo kale oo ay ciidamada Itoobiyaanka ku soo jawaabeen madaafiic ay dad rayid ah ku dhinteen. Ruunkinet 15/02/07 (Click)
Odayaasha iyo waxgardka beesha Gaaljecel ee gobolka Gubbada Hoose oo sheegay in aysa taageersaneyn maamulka uu madaxweyne Cabdullahi Yuusuf u magacaabay Kismaayo iyo Dahir Ammin Jeesow oo ku tilmaamay maamulka laga sameeyay gobolka Hiiraan mid aan laga fiirsan. Ruunkinet 14/02/07 (Click)
Prof. Geeddi oo maanta soo gaaray Nayroobi si uu uga qeyb galo goobjoog ahaan shir 14 bishan ka furmaya dalka Fransiiska, Col. Afguduud oo lagu eedeynayo qaraxii shalay ka dhacay Kismaayo iyo beelaha deggan gobolka Jubbada Hoose oo maamulkii madaxweyne Yuusuf sameeyay laga qadiyay. Ruunkinet 12/06/07 (Click)
Madaafiic ay ciidamada Itoobiya u qeybiyeen xaafado Xamar ka tirsan xalay iyo Ciidamo beeleed la wareegay maamulka Matabaan maanta. Ruunkinet 12/02/07 (Click)
Bam madax looga dhuftay taliyaha ciidamada Itoobiya oo geystay dhimasho iyo dhaawac ay ku jiraan saraakiis ka tirsan maamulka iyo ciidamada dowladda iyo Villa Baydhabo oo xalay la weeraray. Ruunkinet 11/02/07 (Click)
Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo billaabay in ay ku gabadaan Villa Soomaaliya kadib markii loo dhaartay, Madaafic lagu garaacay goobo badan oo ka tiran Xamar, Madaxweyne Yuusuf oo si xowli ah ugu diraya Kismaayo taageerayaashiisa inta ay qasan tahay Muqdisho iyo taageerayaasha Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Prof. Geeddi oo saf ugu jira sidii loogu magacaabi lahaa safiirada dowladda u fadhiya dibadda. Ruunkinet 10/02/07 (Click)
War deg deg ah: Jeneraal Naaji oo xilka laga qaaday xilkiisina loo dhiibay Ina Libaax sanka Ka taabte. Ruunkinet 09/02/07 (Click)
Beelaha deggan galbeedka Hiiraan oo ka tashanaya sidii ay uga go'i lahaayeen Bariga Hiiraan kadib markii caddaallad darraddii ugu weyn ee abid soo bartay ay ku sameysay dowladda Prof. Geeddi iyo xaqiiqada dhabta ah ee madaxweyne Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geeddi ay go'aansadeen. Ruunkinet 09/02/07 (Click)
Madfac maanta lagu riday ciidamada Itoobiya oo marayay agagaarka Tarbuunka oo ku dhacay gaari rakaab ah, gantaallo lala beegsaday xalay goobo ay degan yihiin saraakiisha iyo ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ah ee magaalada Muqdisho iyo warar sheegaya in dowladda damacsan tahay in weerar ay ka qeyb qaadanayaan 10 kun oo ciidan oo hubka looga dhigayo koonfunta Muqdisho. Ruunkinet 08/02/07 (Click)
Wasiirro xiriir wanaagsan la lahaa Prof.Geeddi iyo Col. Yuusuf oo xilkoodi waayay iyo Sheekh Shariif oo culeys siyaasadeed soo food saaratay. Ruunkinet 07/02/07 (Click)
Madaafiic saakay lala dhacay Madaxtooyada Muqdisho kadib markii dadka degaankaasi loo sheegay in ay ka guuraan goobaha u dhow Villa Soomaaliya, Ciidamadii reer Puntland ee shalay weerartay Guure Ceel iyo Matabaan oo la sheegay in ay wateen gawaari cusub oo ay ka soo qaateen shacabka ku nool gobollada Koonfureed iyo madaxweyne Cabdullahi Yuusuf oo la sheegay in uu Itoobiya ka codsaday in ay hubka ka dhigaan beelo ka tirsan USC-da inta aysan dalka ka bixin. Ruunkinet 06/02/07 (Click)
26ka bishan oo la filayo in fasax la siiyo mudanayaasha baarlamaanka ee ku sugan Baydhabo si loo fuliyo sharciga xukunka deg deg ah, Weerar aroornimadii saakay lala beegsaday dekedda Xamar iyo taageerayaasha dowladda federaalka ah oo maanta ku shiraya Hotel Kaah ee magaalada Muqdisho. Ruunkinet 05/02/07 (Click)
"Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf Hanoolaado, Yuusuf Garaad ha dhaco", Dad u badan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool UK kana soo jeeda Puntland oo shalay ku dhawaaqayay ereyadaasi. Ruunkinet 04/02/07 (Click)
Sheekh Shariif oo Sanca aaday iyo saraakiil ka socota AU-da muqdisho booqanaya. Ruunkinet 04/02/07 (Click)
Col. Maxamed Cali Khalaf oo saakay lagu dilay agagaarka Baar Ubax, Dad isugu jira rayid iyo maleeshiyaad laga raray Puntand oo doomo Kismaayo lagu keenay iyo xaaladda wadada isku xirtay Xamar iyo Marka oo go'day ammaan darro darteed. Ruunkinet 03/02/07 (Click)
Sheekh Adan Madoobe oo ku guuleystay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka kadib markii uu madaxweyne Yuusuf u galay dadaal weyn doorashadiisa. Ruunkinet 31/01/07 (Click)
Madaafiic lala beegsaday xalay fiidkii saldhigga Darmooley ee ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyadii reer Puntland oo taageerayaasha Maxamed Dheere ay jid gooyo weerar ah ugu sameeyeen goob aan ka fogeyn Jowhar. Ruunkinet 31/01/07 (Click)
Taageerayaasha madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ee ku nool dalka Ingriiska oo doonaya in BBC-da laabteeda AfSoomaaliya loo dhiibo shaqsi aan ka tirsanayn beelaha USC-da. Ruunkinet 30/01/07 (Click)
Mas'uuliyiinta sare ee dowladda federaalka oo si weyn uu doonaya in Sheekh Adan Madoobe loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka iyo 9 ka mid ah 12ka mas'uul ee maamulka maaliyadda Kismaayo oo ay isku beel yihiin madaxweynaha Soomaaliya. Ruunkinet 30/01/07 (Click)
Maleeshiya ka tirsan Puntland oo ku soo jeedda Xamar, mas'uuliyiintii ay qaraabada ahaayeen Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Xuseen Caydiid oo ay u magacaabeen nabadgeliyada Muqdisho oo howshoodi wadi la' iyo wara kale. Ruunkinet 29/01/07 (Click)
"Prof. Cali Geeddi iyo beesha Muddulloodba kama sugeyn in ay sidan wax yeelayaan" Xuseen Cismaan Cabdi (Sanweyne). Ruunkinet 29/01/07 (Click)
Maxamed Dheere oo oglaaday in xilka Jowhar laga qaado kadib markii loo balan qaaday jagada guddoomiyaha gobolka Banaadir, Prof. Geeddi oo Jowhar u magacaabay mas'uuliyiin dhamaan ka soo wada jeeda Muddullood iyo maleeshiya hubeysan oo xalay weerartay qaar ka tirsan saldhigyada booliiska Xamar. Ruunkinet 28/01/07 (Click)
Taageerayaasha Maxamed Dheere oo la sheegay in ay isu diyaarinayaan dagaal ay la galaan ciidamada Itoobiya iyo dad rayid ah oo xalay ay ciidamada Itoobiya la bexeen. Ruunkinet 27/01/07 (Click)
Dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho oo sii kordhay, dad badan oo joojiyay in ay salaadda subax iyo cishaha ku dukadaan masaajidyada iyo garoonka ciidamada jooga garoonka dayuuradaha Muqdisho oo u muuqda qaar aar goosi wada. Ruunkinet 26/01/07 (Click)
Madaafic lala beegsaday garoonka dayuuradaha ee Muqdisho maanta iyo Sheekh Shariif iyo wafdi ka socda maxaakiimta oo la filayo in ay aadaan dalka Yeman. Ruunkinet 24/01/07 (Click)
Sheekh Shariif oo ay Nayroobi si weyn ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Kenya kadib markii Mareykanku sidaasi u sheegay, QM iyo EU-da oo fariin adag u diray dowladda madaweyne Yuusuf. Ruukinet 23/01/07 (Click)
Nin ay isku hayb yihiin ra'isul wasaare Geeddi oo la sheegay in uu ka dambeeyay weerarkii lagu qaadaya madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo dadka degan agagaarka madaxtooyada oo lagu amray in ay ka guuraan guryahooda si loo dejiyo ciidamada Puntland. Ruunkinet 21/01/07 (Click)
Shariif Xasan iyo xildhibaanno taageersan oo la filayo in ay xarun ka dhigtaan Jabuuti ama Eritereya, Madaxweyne Yuusuf oo la filayo in uu dhawaan dib u dhigo doorasho la filayay in ay xildhibaanada taageersan ku doortaan guddoomiye cusub kadib markii culeys kaga yimid beesha caalamka, Wasiirada arimaha dibadda EU-da oo Isniinta ka shiraya sharci darrada lagu casilay guddoomiye Shariif iyo ammaan darrada Xamar oo ka sii dartay. Ruunkinet 21/01/07 (Click)
Walaac iyo cabsi ku soo koradhay madaxtooyada Villa Soomaaliya kadib markii madaafiic lala beegsaday fadhiga madaweyne Yuusuf iyo taageerayaasha Col. Cabdullahi Yuusuf oo sheegay in ay arrintan u taal taageerayaasha Cali Geeddi iyo Cabdiqaasim Salaad. Ruunkinet 20/01/07 (Click)
Dowladda Mareykanka oo cambaareysay xil ka qaadista Guddoomiye Shariif una sheegtay xukoomadda Soomaaliya in ay Mareykanka joojinayaan 40 million oo deeq deg deg ah ay siin lahayd, Qanyare oo ay cabsi la soo deristay kadib markii la laayay qaar ka tirsan ilaaladiisa iyo burcad dad ku laysay jidka u dhexeeya Jowhar iyo Buulo Burte. Ruunkinet 19/01/07 (Click)
Ciidamada Itoobiya oo la sheegay in ay Xamar dib uga guranayaan, Nin lug curyaan ka ah oo ka tirsan ciidamada Puntland oo dhibaanta badan ay ka sheegayaan dadka ka dhoofaya garoonka Magaalada Muqdisho iyo Meles Sanaawe oo muddo gaaban kala hadlay madaxweyne Kibaanki kadib markii ay ku soo korodhay dhimashada ciidamadiisa ku sugan Muqdisho. Ruunkinet 17/01/06 (Click)
Motion xilka looga qaadayo Shariif Xasan oo mudanayaasha taagta taran ee Baydhabo ku sugan la filayo in maanta la horkeeno, Pegos, Kiish Bur iyo Sheekh Adan Madoobe oo la filayo in ay ku tartamaan jagada guddoomiye Shariif, EU-da iyo Jaamacadda Carabta oo si weyn u diidan xilka laga qaado. Ruunkinet 17/01/07 (Click)
Ciidamada Itoobiya, Taageerayaasha madaxweynaha iyo ra'isul wasaare Geeddi oo maanta xasuuq u geystay dad rayid ah, EU-da oo dalka Belgium ugu sheegay guddoomiye Shariif Xasan in ay aad uga xunyihiin dhibaatada ka jirta Soomaaliya isla markaan cambaareeyay duulaanka Mareykanka iyo Itoobiya ee Soomaaliya. Ruunkinet 15/01/07 (Click)
Col Cabdullahi Yuusuf oo wareegto la sheegay in uu ku magacaabay maamulka sare ee gobolka Banaadir. Ruunkinet 15/01/07 (Click)
War deg deg ah: Dowladda Col. Cabdullahi Yuusuf oo xirtay idaacadaha ugu weyn Muqdisho iyo TV-ga AlJazeera lana filayo in ay albaabada u laabto telefoonnada goor dhow si loo xasuuqo qaar ka tirsan shacabka ku dhaqan Xamar. Ruunkinet 15/01/07 (Click)
Dagaal xoogan oo xalay ka dhacay Xamar kadib markii ay farxumeyn iyo guryo kala bixid billaabeen ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ah ee baaraya xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho. Ruunkinet 15/01/07 (Click)
Isbitaalka Carafaad iyo xaafadaha u dhow oo hub uruurin lagu sameeyay maanta iyo wadaadadii ka tirsanaa maxaakiimta ee reer Puntland oo cafis gaar ah loo fidiyay. Ruunkinet 14/01/06 (Click)
War deg deg ah: Golaha baarlamaanka oo maanta ansixiyey shan mas'uul oo la wareegta awoodda dowladda in kastoo ay dorraad diideen iyo xawaaladaha muqdisho oo la filayo in albaabada loo laabo cabsi ay ka qabaan in hantidooda lala wareego. Ruunkinet 13/01/07
Qaar ka tirsan hoggaamiye kooxeedyadii Muqdisho oo ogolaaday in ay hubkooda iyo maleeshiyadooda ku wareejiyaan taageerayaasha madaxweyne Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geeddi kadib markii looga xoog roonaday dagaalkii Villa Soomaaliya, xubnaha golaha baarlamaanka ee ku sugan Baydhabo oo diiday in ay ogolaadaan in 7 xubnood ay maamulaan siyaasadda dalka iyo xildhibaannadii macaaradka ahaa ee ku sugnaa Nayroobi oo kala aadaya Baydhabo iyo meelo kale. Ruunkinet 13/01/07 (Click)
Ilaalada Madaxweynaha oo u badan reer Puntland iyo kuwa Maxamed Qanyare oo isku rasaaseeyay madaxtooyada Villa Soomaaliya, Qaar ka tirsan mas'uuliyiinta sare ee dowladda oo doonaya in ay u dhaqmaan sidii kacaankii Siyaad Barre iyo Siyaasiyiin sare oo la taliya madaxweynaha oo kula taliyay in Cabdullahi Yuusuf ugu baaqo shacabka reer Muqdisho inuu uga hayo shaqo dekedda iyo hay'adda nabadsugiida. Ruunkinet 12/01/07 (Click)
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka billabay hub uruurin goobo ka tisan koonfurta magaalada Muqdisho iyo ku dhufo ee ka dhaqaaqa lagu hayo ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda ee taagreesan Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Prof. Geeddi oo ku soo kordhaya. Ruunkinet 10/01/07 (Click)
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta soo saaray wareegto ay dad badan u arkeen in hubka lagu wareejinayo beelo gaar ah iyo ciidamada Itoobiya ku kuwa Dowladda Federaalka ah ee u badan taageerayaasha Prof. Geeddi iyo Col.Cabdullahi Yuusuf oo maanta lagu arkayay goobtii xala qaraxa ka dhacay oo gaadiika ka wareejinaya. Ruunkinet 10/01/07 (Click)
Madaxweynaha Soomaaliya oo arrimo la xiriira ammaan darro xalay u seexday Hotel Naasa Hablood iyo qarax weyn oo ka dhacay magaalada Muqdisho fiidnimadii saacadda Xamar. Ruunkinet 09/01/07 (Click)
Dayuuradaha Mareykanka oo ka qeyb qaaty duqeynta goobka ka mid ah Soomaaliya. Ruunkinet 09/01/07 (Click)
Maleeshiyada Xuseen Caydiid oo laga saaray Madaxtooyada arrimo la xiriira ammanka madaxweyne Yuusuf iyo isbaara dhigashada oo ku soo badaneysa Muqdisho iyo agagaarkeeda. Ruunkinet 09/01/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo la sheegay in uu Xamar soo gaaray iyo Muran dhex maray maanta laba ciidan oo kala taageersan Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Prof. Geeddi kadib markii ciidamada laga keenay ay tuseen kuga Cali Geeddi aamar ku taagleyn aysan sugeyn. Ruunkinet 08/01/07 (Click)
Madaxweynaha Soomaaliya Col. Cabdullahi Yuusuf oo shalay maleeshiya cusub ku soo kordhiyay magaalada Kismaayo iyo Suuqa Bakaaraha oo ay dad badan hantidooda u badan dahabka iyo lacagta ka qaadanayaan kadib markii ay maqleen warar sheegaya in ciidamo taageersan Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geeddi oo doonayaa in ay weerar ku qaadaan Suuqaasi. Ruunkinet 08/01/07 (Click)
Dibadbax ay dad ku dhinteen oo lagu diidan yahay ninkii ugu horeeyay ee ku tilmaama Al Qaacidda beelaha deggan galbeedka Hiraan oo ay Ciidamada Itoobiya xirtay iyo Wafdi uu hoggaaminayo ra'isul wasaare Geeddi oo Nayroobi u aaday in uu kula kulmo mas'uuliyiin ka tarsan beesha Caalamka oo ay ka mid tahay Jendai Frazer. Ruunkinet 07/01/07 (Click)
Ciidamada Itoobiya oo rasaas ku furay dad ku mudaaharadaaday Tarbuunka maanta, Maleeshiyada laga keenay Puntland oo ka niyad jabtay dib u dhigidda dowladda ee kub ka dhigidda Muqdisho iyo Mudaaharaad wata rashado oo maata ka dhacay magaalada Muqdisho. Ruunkinet 06/01/07 (Click)
Qaar ka tirsan maleeshiyada laga keenay Puntland ee ku sugan Jowhar oo sheegay in ay doonayaan in hub kadhigista ka billaabi doonaan suuqa Bakaaraha, Guddoomiyihii maxaakiimta ee gobolka Hiiraan oo ay beeshiisa sheegtay inuu la shaqeyn doono dowladda federaalka ah balse mas'uuliyiinta beelaha kale ee ka tirsanaa ay yihiin dambiileyaal iyo Hoggaamiye kooxeedyo ay ka mid yihiin Muuse Suudi oo Soomaaliya ku soo laabtay. Ruunkinet 06/01/07 (Click)
4 xildhibaan oo ka mid ah 26kii xildhibaan ee Madaxweyne Yuusuf codsaday in ay dowladda Kenya xirto oo xabsiga la dhigay (magacyadooda iyo beelahdooda) iyo Contact Group oo ga'aanno ku gaaray magaalada Nayroobi. Ruunkinet 05/01/07 (Click)
Naqshaddii ay soo bandhigeen golaha maxaakiimta iyo warka Xuseen Caydiid oo la sheegay in ay iswaafaqaya ..iyo Qarax xalay ka dhacay xarunta CID-da magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ciidamada Itoobiya iyo cabdsi xoogan oo soo food saartay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Ruunkinet 05/01/07 (Click)
Taageerayaasha tuuteysan ee Col. Yuusuf iyo Prof. Geeddi ee loogu magac daray ciidada xoogga dalka oo la filayo in ay hub uruurin ka billaabaan berrito oo Sabti ah koofunta magaalada Muqdisho ---- Kooda loogu yeero contact group oo maanta shir ka yeelanaya arrimaha Soomaaliya ------ Madaxweynaha Kenya oo ugu baaqay madaxweynayaasha IGAD iyo ay kulan deg deg ah ku yeeshaan Nayroobi, ---- iyo Prof. Caddow iyo Enj. Aftooje oo u dhoofay shalay Qaahira kadib markii uu Mareykanku gacan ku siiyay. Ruunkinet 05/01/07 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo la sheegay in uu kula heshiiyay maamulka cusub ee uu Hiiraan u magacaabay in gobolka Hiiraan la hoos geeyo maamul goboleedka Puntland, qaar ka tirsan taageerayaasha Ra'isul wasaare Geeddi oo 10 qori ku wareejiyay Salaad Cali Jeelle Maanta iyo dagaal sokeeye oo la filayo in uu ka qarxo magaalada Muqdisho. Ruunkinet 03/01/07 (Click)
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo sheegay in ay Somaaliya ka tirsan tahay gobollada Itoobiya iyo nin lagu magacaabo Adan Garaase oo sheegay in uusan aqoonsaneyn mas'uuliyiintii uu dhawaan u magacaabay gobolka Hiiraan madaxweyne Yuusuf dibna u qabsaday xarunta gobolka Hiiraan. Ruunkinet 02/01/07 (Click)
Nin lagu magacaabo Col. Mukhtaar oo dhawaan madaxweyne Yuusuf u magacaabay taliyaha ciidamada gobolka Hiiraan oo ku tilmaamay AlQacidda beelaha deggan galbeedka gobolka Hiiraan iyo beesha caalmaka oo wadda in ay dhex dhexaadiyaan labaga garab ee dowladda federalka ah ee Soomaaliya. Ruunkinet 31/12/06 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo soo gaaray Afgooye, Caasimadda Soomaaliya oo heer hoose looga ciiday maanta, Sheekh Shariif oo Kismaayo ka sheegay in maxaakiimta ay la dagaalamayaan ciidamada Itoobiya iyo mudaaharaad ballaaran oo shalay laga dhigay safaaradda markeynkana ee London iyo xafiiska ra'isul wasaaraha Igriiska. Ruunkinet 30/12/06 (Click)
Billiqo weyn oo durbaba ka billaabatay magaalada Muqdisho kadib markii ay maleeshiyada maxaakiimta sheegeen in ay xilkoodi shacabka ku wareejiyeen, Soomaalidii fasaxa u tagay Soomaaliya iyo kuwa u guuray ee haysta jinsiyadaha shisheeye oo ka walaacsan in lagu tilmaamo argagixiso iyo masaajidyada Beledweyne oo wara aan la xaqiijin sheegayaan in la doonayo in laga dhigo goob caweys. Ruunkinet 28/12/06 (Click)
Taageerayaasha Dabageed iyo ciidamada Itoobiya oo gacanta ku dhigay Beledweyne, Dabageed oo sheegay in magaalada Beledweyne aanu ku arki karin nin gar leh iyo naag daboolan, Itoobiya oo duqeysan Garoomada Muqdisho iyo Balli doogle iyo Maxamed Dheere oo u gudbay dhinaca Jowhar. Ruunkinet 25/112/ 06 (Click)
Dagaal la filayo in taageerayaasha maxaakiimta ee ku sugan Baydhabo ka billaabaan Baydhabo gudeheeda, Guddoomiye Shariif Xasan oo maanta aadaya Dubai, iyo xildhibaannada jooga Nayroobi oo la filayo in ay soo saaraan baaq xabad joojin ah oo ay ku dalbanayaan in ay Ciidamada Itoobiya ka baxaan Soomaaliya. Ruunkinet 22/12/06 (Click).
Wafdi ka socda EU oo maanta tegaya Soomaaliya, guddoomiye Shariif oo shalay gaaray Nayroobi iyo dagaalka ciidamada Itoobiya iyo kuwa maxaakiimta oo qarka u saaran in uu si buuxda u qarxa. Ruunkinet 20/12/06 (Click)
Ra'isul wasaare Geeddi oo maanta aadaya Baydhabo, madaxweyne Musavini oo markale isku dayaya in uu baarlamaanka ka ansixiyo ciidamo la geeya Soomaaliya iyo Afguduud oo madaxweyne Yuusuf ku eedeeyay dhimashadii maleeshiayadii reer Puntland ee lagu laayay dagaalkii degaanka Diinsoor. Ruunkinet 12/12/06 (Click)
QM oo sii adkeysay cunaqabteyntii hubka ee Soomaaliya, Gudoomiye Shariif Xasan oo sheegay in wax aan wadahadal ahayn waxba looga qaban karin iyo baalamaanka Itoobiya oo ansixiyay in Somaaliya la weeraro. Ruunkinet 30/11/06 (Click)
QM oo maanta ka doodeysa in cunaqabteynta hubka laga qaado Soomaaliya iyo dadka ku nool Muqdisho oo madaaharaad baallaaran ka sameeyey fagaaraha tarbuunka ee Xamar. Ruunkinet 29/11/06 (Click)
Qafaal ciidamo uruurin ah oo laga billaabay Xamar iyo qaar ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo wada in ay Itoobiya dagaal kala hortagaan. Ruunkinet 29/11/06 (Click)
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa maxaakiimta oo lagu kala eedeeyay in ay xasuuq ka geysteen Didaale iyo miino dhigid lagu sameeyay aagaasi. Ruunkinet 23/11/06 (Click)
Guddoomiyaha baarlamaanka oo u muuqday in uu ku guuleysanayo in ay wada hadlaan dowladda iyo midowga maxaakiimta kuna soo laabanaya magaalada Nayroobi dhawaan. Ruunkinet 11/11/06 (Click)
Labada wafdi ee ka kala socda maxaakiimta islaamiyiinta ah iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo aan weli iska soo xaadirin madasha shirka maanta uga furmayay Khartuum iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo ku adkeysatay in uu ka baaqdo kulanka Khartuum hadii uusan hoggaaminayn wafdiga dowladda. Ruunkinet 30/10/06 (Click)
Madaxweyne Yuusuf oo midowga maxaakiimta ku tilmaamay argagixisa isugu jirta afqanistaan iyo Soomaali isla markaana sheegay in aysan Jaamacadda Carabta waxba u hayn Soomaaliya. Ruunkinet 20/10/06 (Click)
Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf oo Nayroobi u yimid in uu ka qeyb galo shir muhiim ah iyo maleeshiyada Digil iyo Mirifle oo qarka u saaran in ay isku dhacaan. Ruunkinet 19/10/06